Ụlọ Ọgbakọ Omebe Iwu Steeti Anambra Anabatala Ndị Isi Oche Nchere Oge Ise
A nọrọ ụnyaahụ wee nabata, dịka ndị tozuru etozu, mmadụ ise bụ ndị ga-ebughara oche dịka ndị isi oche nchere oge n'okpuru ọchịchị Anambra Weesti, Anambra Isiti, Orumba Nọọtụ, Awka Nọọtụ na Ọnịtsha Nọọtụ n'otu n'otu.
Nke a bụ nke e mere site n'aka ndị ụlọ omebe iwu steeti Anambra n'ọgbakọ ha nwere n'isi ụlọ ọrụ ha dị n'Awka, bụkwa nke ha nọrọ na ya wee tụlee ma lebaa anya n'ụfọdụ ihe ndị ọzọ chere ha n'ihu dịka ndị omebe iwu steeti ahụ.
N'okwu ya dịka ọ na-ekwuwa nnabata ahụ, onye okwupụta okwu ụlọ ọgbakọ omebe iwu ahụ, bụ Ọkaiwu Rita Madụagwụ kọwara ndị ahụ dịka ndị e nyochagoro ma chọpụta na ha tozuru òkè iji ya bụ ọkwa, dịka aka na-achị steeti ahụ bụ gọvanọ Willie Obianọ siri wee họpụta ha ma zitere ha ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu ahụ.
Madụ ise ndị ahụ a nabatara na okpuru ọchịchị ha gụnyere: Maazị Sylvester Okafor (maka ịbụ onyeisi nchere oge n'okpuru ọchịchị Anambra Weest); Maazị Pious Ifeadị (ịbụ onyeisi nchere oge n'okpuru ọchịchị Anambra Isiti); Oriakụ Ify Obinabọ (maka okpuru ọchịchị Orumba Nọọtụ); Ferdinand Ọnwụje (maka okpuru ọchịchị Awka Nọọtụ), tinyere Patrick Aghamba (maka okpuru ọchịchị Ọnịtsha Nọọtụ).
N'ozi ekele ha, mmadụ ndị ahụ toro gọvanọ Willie Obianọ, ọchịchị steeti Anambra nakwa ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu ahụ maka ịhụta ha dịka ndị tozuru oke wee họpụta ma nabata ha maka ijere steeti ahụ ozi. Ha kwekwazịrị nkwa iji ezi amamihe na ọgụgụ isi ha nwere wee rụọ ọrụ ha nke ọma ma mepụtakwa ihe a hụrụ anya n'okpuru ọchịchị ha dị iche iche, site n'inye aka Chineke.